कसरी आईफोन मूल हो वा नक्कली र fooled छैन भनेर कसरी थाहा पाउने 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
यो थाहा पाउन सकिन्छ कि आईफोन कुनै तरिकामा मूल हो वा नक्कली। मालिकले IMEI (अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान) जाँच गर्न वा एप्पल वेबसाइटमा सिरियल नम्बर हेर्न सक्दछ। थप रूपमा, त्यहाँ शारीरिक पक्षहरू छन् जुन उपकरण वास्तविक वा प्रतिकृति हो कि भनेर पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। ती मध्ये, स्क्रीन, टिकट र लोगो।
यहाँ कसरी बताउने कि कसरी आईफोन वास्तविक छ वा छैन र मूर्ख नहुनुहोस्।
IMEI र क्रम संख्या द्वारा
आईएमईआई (को लागी अंग्रेजी मा एक्रोनिम) अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल टीमको पहिचान) प्रत्येक सेल फोनको लागि एक अद्वितीय पहिचान नम्बर हो। मानौं यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको साथ एक परिचय कागजात हो। संसारमा कुनै पनि अन्य उपकरण बराबर हुनेछ।
क्रम संख्या एक अक्षर र संख्या मिलेर बनेको कोड हो जसले उपकरणको बारेमा जानकारी सlects्कलन गर्दछ, जस्तै स्थान र निर्माणको मिति, मोडेल, अन्यहरू। सामान्यतया, यो IMEI को समान ठाउँमा पाउन सकिन्छ।
मूल आईफोनमा, यो डाटा बक्समा, स्मार्टफोनको मुख्य भागमा, र अपरेटि system प्रणाली मार्फत उपलब्ध छ।
प्लेब्याक / एप्पल
आईएमईआई र सिरियल नम्बर उपकरण बक्समा बारकोडको छेउमा छन्। अगाडि जानुहोस्, यो लेखिने छ IMEI वा IMEI / MEID (1) छ (S) क्रम संख्या (2), एक संख्यात्मक वा अक्षरांकीय अनुक्रम पछि। यी तारहरू तलको प्रश्नहरूमा देखाइएको जस्तै हुनुपर्दछ।
प्रणाली मार्फत IMEI पत्ता लगाउन, केवल मार्ग अनुसरण गर्नुहोस् सेटिंग्स → सामान्य → को बारे मा। स्क्रिन तल स्क्रोल गर्नुहोस् जब सम्म तपाई आइटम पाउनुहुन्न IMEI / MEID mi क्रम संख्या.
प्रत्येक आईफोनसँग आईएमईआई नम्बर यन्त्रमा दर्ता हुन्छ। स्थान मोडेल अनुसार फरक हुन्छ। धेरै जसोमा, यो सिम ट्रेमा उपलब्ध छ।
आईफोन 6, आईफोन Plus प्लस, आईफोन एसई (पहिलो पीढी), आईफोन s एस, आईफोन c सी, र आईफोन, मा, सामग्री स्मार्टफोनको पछाडि रेकर्ड गरियो। यो शब्दको ठीक तल फेला पार्न सकिन्छ। आईफोन.
कपाल आईडी एप्पल
तपाईं कुनै पनि ईन्टरनेट ब्राउजर मार्फत एप्पल आईडी वेबसाइट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। केवल तपाईंको लगइन विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि सेक्शनमा तल स्क्रोल गर्नुहोस् यन्त्रहरू। उपकरणको छविमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाई IMEI खोज्न चाहानुहुन्छ र विन्डो खुल्नेछ।
संख्याको अतिरिक्त, जानकारी जस्तै मोडेल, संस्करण, र सिरियल नम्बर प्रदर्शित हुन्छन्।
सेल फोन कीपैड द्वारा
IMEI पत्ता लगाउने अर्को तरीका टाइप गरेर हो * # २१ # उपकरण किबोर्डमा। जानकारी स्वचालित रूपमा स्क्रीनमा प्रदर्शित हुन्छ।
सेवा मार्फत कभरेज जाँच गर्नुहोस् (कभरेज जाँच गर्नुहोस्)
एप्पलसँग एक वेबसाइट छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले एप्पल वारेन्टीको स्थिति जाँच गर्न सक्छन् र योग्यता थप एप्पल केयर कभरेज खरीद गर्न योग्यता। यो गर्नका लागि, तपाईंले उपकरणको क्रम संख्या प्रविष्ट गर्नु आवश्यक छ।
यदि आईफोन मूल छैन भने, कोड पहिचान हुनेछैन। यदि सबै ठीकठाक छ भने, यो थाहा पाउन सकिन्छ कि खरीद मिति मान्य छ कि छैन र यदि टेक्निकल समर्थन र मर्मत र सेवा कभरेज सक्रिय छन्।
अपरेटिंग प्रणाली र स्थापित अनुप्रयोगहरू
सबै आईफोनहरू आईओएस प्रणालीमा मात्र काम गर्दछन्। त्यो हो, यदि तपाईंले उपकरण खोल्नुभयो र यो एन्ड्रोइड हो भने, उपकरण पक्कै नक्कली हो। यद्यपि, जालसाजीहरूले प्राय: उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन् जसले एप्पल सफ्टवेयरको नक्कलको नकल गर्दछ।
त्यस्ता अवस्थाहरूमा, फोनले विशेष अनुप्रयोगहरू जस्तै एप स्टोर, सफारी ब्राउजर, सिरी सहायक, लगायत अरूको बीचमा जाँच गर्नु उपयुक्त छ। शंका हटाउन, तपाईं सेटिंग्समा आईओएस संस्करण जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
यो गर्न, मार्ग अनुसरण गर्नुहोस् सेटिंग्स → सामान्य → सफ्टवेयर अपडेट। त्यहाँ, प्रयोगकर्ता प्रणाली संस्करण र यसको बारे जानकारीको साथ मिल्दो छ, मिल्दो उपकरणहरू र समाचारहरू जस्ता।
यो सल्लाह विशेष रूपमा उनीहरूको लागि मान्य छ जसले दोस्रो हाते आईफोन खरीद गर्छन्। कहिलेकाँही पहिले प्रयोगकर्ताले स्क्रिन बिगार्न सक्छ र यसलाई एक गैर-एप्पल वा कम्पनी-प्रमाणितको साथ बदल्न सक्छ।
तर के प्रयोग गरी समस्या छ मनिटर कुन मौलिक छैन? "गैर-एप्पल प्रदर्शनले अनुकूलता र प्रदर्शन मुद्दाहरू निम्त्याउन सक्छ," निर्माता वर्णन गर्दछ। यसको अर्थ त्रुटिहरूमा त्रुटि हुन सक्छ बहु-स्पर्श, उच्च ब्याट्री खपत, अनैच्छिक स्पर्श, अन्य अवरोधहरू बीच।
आईफोन ११ बाट प्रणाली मार्फत मूल जाँच गर्न सम्भव छ। यो गर्नका लागि केवल मार्ग अनुसरण गर्नुहोस् सेटिंग्स → सामान्य → को बारे मा.
यदि तपाईं देख्नुहुन्छ पर्दामा महत्त्वपूर्ण सन्देश। यो आईफोनको मूल एप्पल स्क्रिन छ भनेर प्रमाणित गर्न सम्भव छैन, एक मूल प्रतिस्थापन लागू गरिएको छैन।
अन्य भौतिक पक्षहरू
उपकरणको शरीरका केही सुविधाहरूले आईफोन वास्तविक छ वा छैन भनेर संकेत गर्न सक्दछ। त्यसोभए यदि तपाईं एप्पल उपकरण किन्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई केही विवरणहरू थाहा छ।
आईफोन Since देखि एप्पलले आफ्नो स्मार्टफोनमा परम्परागत हेडफोन ज्याक प्रयोग गरेको छैन, P7 भनेर चिनिन्छ। तसर्थ, यो केवल बिजुलीको प्रकार कनेक्टरको साथ प्रयोग गर्न सम्भव छ, उही एउटाले तपाईंलाई तपाईंको स्मार्टफोन रिचार्ज गर्न अनुमति दिन्छ। वा वायरलेस मोडेलहरू, ब्लुटुथ मार्फत जडित।
त्यसकारण यदि तपाईले नयाँ आईफोन किन्नु भयो जुन कि सामान्य हेडफोन ज्याक छ, उपकरण वास्तविक छैन।
सबै आईफोनहरूमा प्रसिद्ध एप्पल लोगो यन्त्रको पछाडि अवस्थित हुन्छ। मूलमा, जब प्रयोगकर्ताले आइकन स्लाइड गर्दछ, तिनीहरूले सतहको सम्बन्धमा कुनै फरक वा राहत याद गर्दैनन्।
अधिक र अधिक विशेषको बावजुद, प्रतिकृति र जालसाजीका उत्पादकहरूलाई यस प्रकारको प्रभाव पुन: उत्पादन गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण परिणामको प्राय: सतह र एप्पलको छवि बिच फरक हुन्छ।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस्
हातमा उपकरणको साथ, यसको उपस्थिति एप्पल वेबसाइटमा गरिएको वर्णनसँग तुलना गर्न सम्भव छ। विवरणहरू जस्तै कि त्यस मोडेलका लागि उपलब्ध र colorsहरू, बटनहरूको स्थान, क्यामेरा र फ्ल्यासहरू, अन्यमा जाँच गर्नुहोस्।
कम्पनीले फिनिशको प्रकार वर्णन गर्दछ। जस्तै "म्याट टेक्स्चर गिलास, फ्रेमको वरिपरि स्टेनलेस स्टील फ्रेमको साथ," आईफोन ११ प्रो म्याक्सको मामलामा।
प्रत्येक मोडेलको लागि उपलब्ध क्षमता पनि हेर्नुहोस्। यदि तपाईं १२128 जीबी आईफोन एक्स प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने होशियार हुनुहोस्, श्रृंखलामा 64 जीबी वा २256 जीबीको मात्र विकल्पहरू छन्।
के आईफोन छैन
आईफोनका केही ब्रान्डको स्मार्टफोनमा साधारण प्रकार्य हुँदैन। एप्पल उपकरणहरू डिजिटल टेलिभिजन वा स्पष्ट एन्टेना छैन। तिनीहरूसँग मेमोरी कार्ड वा ड्युअल-सिमका लागि ड्रयर पनि छैन।
ध्यान दिनुहोस्: आईफोन XS, आईफोन XS अधिकतम, आईफोन XR वा पछि मोडेल जस्तै एक डबल सिमुलेशन प्रकार्य छ। एक चिपको लागि मात्र खाली ठाउँ भए पनि, न्यानो सिम कार्ड र ई-सिम कार्ड प्रयोग गरिन्छ, जुन चिपको डिजिटल संस्करण हो।
धेरै कम मुल्यहरु बारे सावधान रहनुहोस्
यो केहि स्पष्ट देखिन्छ, तर जब प्रस्ताव सही हुन राम्रो छ, यो शंकास्पद हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं एक विश्वसनीय स्टोरमा अन्य विश्वसनीय प्रतिष्ठानहरूको तुलनामा एकदम कम मूल्यमा आईफोन पाउनुभयो भने, शंकास्पद हुनुहोस्।
यो ध्यान देने योग्य छ कि केहि मूल उपकरणहरू सामान्य रूपमा सस्तो मूल्यमा गम्भीर कम्पनीहरू द्वारा बेचिन्छ किनभने तिनीहरू प्रदर्शन वा मर्मत गरिन्छन्, भनिन्छ पनि सुधारिएको। सामान्यतया, स्टोरहरूले मूल्य घटाउनुको कारण संकेत गर्दछ।
नामको रूपमा एक शोकेस आईफोन, केहि समयको लागि प्रदर्शनमा छ कि एक हो। त्यो हो, यो चेकआउटमा सुरक्षित गरिएको थिएन र यो ग्राहक वा कर्मचारी अन्तर्क्रियाको कारण केहि चिह्नहरू हुन सक्छ।
पुन: अनुशंसित उपकरण एक हो जुन केही समस्याका कारण निर्मातालाई फिर्ता गरिएको थियो र समस्या भागहरू प्रतिस्थापन गरिएको थियो। ब्याट्री र पछाडि पनि परिवर्तन भएको छ। तिनीहरू सामान्य रूपमा १%% छुटमा बेचिन्छन् र नयाँ स्मार्टफोनको जस्तै ग्यारेन्टीहरू छन्।
कसरी जान्ने कि मेरो आईफोन पुन: शर्त छ
यो जान्न सम्भव छ मोडेल नम्बर। यो गर्नका लागि जानुहोस् सेटिंग्स → बारेमा। यदि मोडलको अक्षरबाट सुरु हुन्छ भने मेट्रोयसको मतलब यो नयाँ हो। यदि तपाईं पत्र संग शुरू F, यो नविकरण गरिएको छ।
संयोगवश तपाईंले पत्र देख्नुभयो भने पी, यसको मतलब यो निजीकृत गरिएको छ। चिठी नोर्टे यो एप्पल द्वारा एक दोषपूर्ण उपकरण प्रतिस्थापन गर्न दिइएको थियो संकेत गर्दछ।